Nnukwu Mgbapụta Induction Dị Elu Maka Usoro Ahịrị
Ultrasonic Welder 15KHz
Ultrasonic Welder 20KHz
Ultrasonic Welder 35KHz
Ultrasonic Welder 40KHz
Home / ngwa / Nkọwa na-aga n'ihu / Nnukwu ọkụ ọkụ na-agba ume ugboro ugboro maka eriri akụkụ
Categories: ngwa, Nkọwa na-aga n'ihu Tags: otutu oge preheating threadings, induction preheat maka eri, nkwalite ịmalite ịmalite, igwe onu ahia ndi mmadu, usoro ntinye aka na mbu, preheat maka eri, preheat eri, na-ekpo ọkụ
Onye ahịa na-ebu ụzọ mee akụkụ dị iche iche ka ha wee nwee ike ịkọ. Ebumnuche nke ule a bụ iji kpoo akụkụ nke ọ bụla na 600 Celsius F (316 Celsius) n'okpuru 30 sekọnd.
DW-HF-15kw igwe eji eme oku nbata
nbanye igwe ọkụ HF-15
Ndị ahịa nyere ndị nlele ihe nlele. Ndị a gụnyere:
• Nkebi nke 1 nke nwere magnetik na 0.375 "(9.525mm) OD
• Akụkụ nke ihe mejupụtara magnetic steel nwere 2 ”(0.5mm) OD
• Nkebi nke 3 nke nwere magnetik na 0.875 "(22.225mm) OD
• Akụkụ nke ihe mejupụtara magnetic steel nwere 4 ”(1.5mm) OD
• Ejiri eriri igwe abụọ. Mgbapu 1 maka kpo oku nke 4 na 1.5 ”(38.1mm) OD. A na-ekpochapu akụkụ ndị ọzọ niile na eriri igwe 2.
Okpomoku: ihe dika 600 ° F (316 Celsius)
• Akụkụ nke mbụ: 1 kW
• Akụkụ nke 2: 2.6 kW
• Akụkụ nke 3: 4.74 kW
• Akụkụ nke anọ: 4 Kw
Oge: erughị sekọnd iri atọ
Akụkụ ahụ hiwere isi na eriri igwe.
DW-HF-15kw Induction Okpomoku di oku eweputara.
E jiri igwefoto achoro nke okpukpu kpuchiri otutu ya na ihe omuma nke Tempilaq.
Ejiri otu ntọala akụrụngwa nwalee akụkụ ahụ niile. Enweghị mgbanwe ọ bụla achọrọ n'etiti usoro okpomọkụ, ọzọ karịa ịgbanyụ eriri igwe maka Nkebi 4. Nke a bụ n'ihi DW-HF-15kw Induction Heating Power Technologies 'na-agbanwe agbanwe nke na-enye ohere ka usoro ikpo ọkụ induction nwee ike ịnabata na nnukwu ibu.
Nsonaazụ / Uru:
Cchịkọta oge na okpomọkụ
Ike na choro site na okirikiri okpomoku
Echigharịrị usoro, ọ bụghị onye ọrụ dabere mgbe edobere akụkụ ya na akwu
ọla kọpa na-emegharị nkwado
Mwepụ Nkwado Mgbochi Mgbasaozi na-enye nsogbu
Brazing Steel tube na tube ọla kọpa na itinye n'ọkwa okpomọkụ
Ngwa Ntinye usoro ikpo ọkụ waya
induction preheating ọla kọpa
ntinye ọkụ maka ikpochapu nke igwe
Ojiji nke oku oku nke oku
mkpanaka ọla kọpa na-emepụta ihe
ntinye batrị titanium nke mpịakọta maka ịgbagharị
induction kpo oku nanoparticle ngwọta
Usoro ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ na gas na teknụzụ ọkụ
usoro induden hardening usoro
Nrụgide nrụgide na-ewepụ oghere dị larịị
akụrụngwa mgbatị ọgbụgba
shaft itinye n'ọkwa hardening igwe
Sanwichi esi nri igwe na-eme ka ọ dị elu
Igwe eji eme ihe na-eme ka osi nri
MFS usoro ikuku kpo oku
Rail elu ugboro itinye n'ọkwa hardening igwe